समाचार Archives - Naya Pusta
Naya Pusta January 19, 2018 समाचार
कार्यक्रममा बोल्दै ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले ग्रेटर नेपालको जमिन बैधानीक रुपमा नेपालको भईसकेको स्थितीमामा समेत भारतले अतिक्रमण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँ । छप्कैया पर्साको ५० बिघा जमिन भारतमा मिचिएकोमा आपत्ति जनाउँदै ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल र सिमानामा काँडेतार अभियानका अभियन्ता नवल खडकाको नेतृत्वमा धर्ना एवम् विरोध प्रदर्शन
ड्रोन उडाउने एक भारतीय पक्राउ
Naya Pusta January 17, 2018 Special News, पदेश नम्बर ३, समाचार
काठमाडौं । सरकारसँग अनुमति नलिई नेपालमा ड्रोन उडाउन पाइन्न। ड्रोनको सहायताले संवेदनशिल ठाउँको तस्बिर खिच्ने तथा गोप्य सूचना चुहिन सक्ने भन्दै अनुमति नलिई ड्रोन उडाउन नपाईने व्यवस्था नेपालमा छ। तर बेलाबेलामा अटेर गरी ड्रोन उडाउने गरिएको छ। यस्तै काठमाडा्रंको बुढानिलकण्ठमा एकजना बिदेशीलाई ड्रोन उडाइ रहेको बेला प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–३
Naya Pusta January 16, 2018 पदेश नम्बर ३, समाचार
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर सुशील चापागाईंलाई दश हजार रुपैयाँ घुससहित कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयकाअनुसार भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा आयोगको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका इन्जिनियर चापागाईंमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको
Naya Pusta January 16, 2018 Special News, पदेश नम्बर ३, समाचार
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध रुपमा सुन भित्र्याउने मध्येका एक अभियुक्तलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ। अघिल्लो वर्षको पुस २१ गते दुबइबाट ३३ किलो ५ सय ७७ ग्राम अवैध सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्र्याउने भारत राजस्थान गंगानगर स्थायी घर भएका ३२ वर्षीय राहुल गोयललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनी काठमाडौं गौरीधारा विशालबजार
माघेसक्रान्तिमा देवघाटमा नुहाउने क्रममा डुबेर मृत्यु
Naya Pusta January 15, 2018 Special News, पदेश नम्बर ३, समाचार
रत्ननगर। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१ देवघाटस्थित माघी मेलामा नुहाउने क्रममा डुबेर आज एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । देवघाटस्थित झोलुङ्गे पुलमुनि त्रिशूली नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर चितवन रत्ननगर नगरपालिका-३ का ७८ वर्षीय पदमनाथ अधिकारीको मृत्यु भएको चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिए । बिहान करिब १०ः३० बजे नुहाउने क्रममा अचानक ढुङ्गाबाट
तराईमा अत्यधिक चियो : मृत्यु हुनेको संख्या २८ पुग्यो
Naya Pusta January 12, 2018 समाचार, समाज
काठमाडौं, २८ पुस । तराई मधेसका जिल्लाहरूमा बढेको चिसो र शीतलहरका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २८ पुगेको छ। चिसोका कारण मर्नेमा पनि वृद्धवृद्धा र बालबालिका बढी छन्। शीतलहरका कारण चिसो लागेर सप्तरी र रौतहट जिल्लामा मानवीय क्षति बढी भएको भएको छ। सप्तरीमा ११ जना र रौतहटमा आठ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले
Naya Pusta January 9, 2018 पदेश नम्बर ३, समाचार
काठमाडौं । प्रहरी हिरासतमा रहेका डा. गोविन्द केसीलाई वीर अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. केसीलाई मंगलबार बयान लिइएको थियो। त्यसक्रममा उनले छाती दुखेको बताएका थिए। बयान भएपनि बहस हुन सकेन र अदालतले प्रहरी हिरासतमै राख्न आदेश दियो। तर, सिंहदरबार बृत्त लैजाने क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि डा. केसीलाई
प्रा डा केसीले दिए सर्वोच्च अदालतमा यस्तो बयान
Naya Pusta January 9, 2018 Special News, पदेश नम्बर ३, समाचार, स्वास्थ्य
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अवहेलना मुद्दामा वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीसँग आज बयान लिएको छ । अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गरी आज बिहान अदालतमा उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोमबार आदेश दिइएपछि उहाँलाई उपस्थित गराइएको हो । बयान सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशमा